उनी, म र मेरो डायरी २ | सुमन भट्टराई | Offline Thinker - Offline Thinker
उनी, म र मेरो डायरी २ | सुमन भट्टराई | Offline Thinker
उनी म र मेरो डायरी- भाग १
ढल्किदो रात; अगाडि एक कप चिया, वरिपरि माथि उड्दै गरेको चुरोटको एक सर्को धुँवा, आँखा अगाडि डायरी र एउटा कलम अनि मस्तिष्क भरी उनका यादहरु ! लाग्छ जीवनको अस्ली मज्जा यसैमा छ । यो अवस्थिती उत्कृष्टताको पूर्ण प्रारुप हो । र यसका अगाडि संसारका सबै अनुभवहरु फिक्का छन् । चिनी बिनाको चिया जस्तै !
अहिले म उनी र मेरो डायरी बिचको सम्बन्ध केलाउँदै हराएको छु । अलिकति आफूमा; अलिकति उनीमा ! उनी मेरो जीवनमा हुरी जसरी आएकी हुन् । जसरी हुरीको आगमनको कुनै पत्तो हुँदैन । हुरीले आफूसङ्ग अनेकन कसेर लिएर आउँछ । उनि पनि मेरो जीवनमा हर्ष, उमङ्ग, आशा, र माया लिएर आएकी थिइन ।
उनको आगमनको न मलाई पत्तो थियो न उनीलाई !
उनीसंगै आएका आशा, उमङ्ग र माया म आफुले सम्हाल्न थियो । र त्यो समाल्दै थियो मेरो डायरीले । र अझैसम्म सम्हाल्दै छ ।
डायरी जबजब म भरिएको छु; मायाले, यादले, पीडाले, खुशीले ! तबतब तिम्रा पाना भरिएका छन् ।
जबजब म उनीसंग टाढिएको छु, तबतब तिमीसँगै नजिकिएको छु ।
तिमीसँगको मेरो सम्बन्ध गौथली र गुणको जस्तो न रहेछ । गुण छोडेको गौथली केही समय संसार चहारेर आफ्नै थलोमा फर्कन्छ । त्यस्तै म उनको संसार चहारेर, माया उन्मुक्त पीडा र यादहरुले भरिएपछी रित्तिनको लागि तिमी थिम फर्किन्छु । तिमीसँग मेरा भन्दा उनका कुरा बढी गरेको छु । कहिलेकाँही म झुक्किन्छु, “मेरो डायरी” उनको हो या मेरो हो? खैर हामी दुबैको हो ।
डायरी: सायद तिम्रो लागि म एउटा बेमौसमी पाहुना हुँ । जो बेलाबखत अर्कैले बाधिदिएको पीडाहरुको गाठो फुकाउन आउँछ । भरिएको यादहरुको भारी बिसाउन आउँछ । उनीले बुझ्न नसकेको माया बुझाउन आउँछ । जो हरदम एकै व्यक्तिको सम्झनाको बह पोख्न आउँछ ।
कुनै फुलहरुको नियती नै बेफ्वाक बोटमै ओइलनु हुँदो रहेछ । उसले रोजेको शिरमा सिउरन उसको बस नचल्ने रहेछ । तिमी पनि मलाई यसैगरी बुझिदिनु है !
हुनपनि तिमीले मलाई उनले भन्दा बढी बुझेका छौ । सायद मैले आफूलाई बुझेभन्दा पनि बढि बुझेका छौ । किनभने युद्ध लडेको योद्धाको पीडा, योद्धालाई भन्दा रणभुमीलाई बढि थाहा हुन्छ । जहाँ योद्धाले दुःखसुख साटेको छ । जहाँ हारजित देखेको छ ।
तैपनी डायरी मैले तिमीलाई खासै केही दिन सकेको छैन । दिए हुँला केही थान शब्दहरु; र उनकै नाममा कोरिएका केही हरफ प्रेम ! जुन सबै अधुरा र निरर्थ छन् । सूर्यको अगाडी राखिएको लालटिन जस्तै ।
बाँकी उनलाई भने दिएको छु मैले एकनास एकतर्फी माया । बदलामा उनले दिएकी छिन प्रेम दर्शन ! सिङ्गो जीवन दर्शन अनि अथाहा भावना । बुझाएकी छिन कि प्रेमको सुर नै बेसुर छ । यसको ताल नै बेताल छ । प्रेमको समान नियम नै असमानता हो । यदि तपाईं केही चिज दिएर केही लिने आशा राख्नुहुन्छ भने प्रेम तपाइँको लागि होइन । प्रेम गर्नका लागि विशाल हृदय चाहिन्छ । असिमित धैर्यता चाहिन्छ ।
त्यस्तै सम्बन्धहरुको नियम पनि कस्तो गज्जबको हुने रहेछ । उनी सजिव छिन् तर पनि उनीसंगको सम्बन्ध निर्जीव छ । र डायरी तिमी निर्जिव छौ र पनि तिमीसँगको सम्बन्ध सजिव छ ।
सायद सम्बन्ध नियममा नभएर अपवादमा चल्छ । प्रेममा भन्दा प्रयासमा चल्छ । त्यसैले सम्बन्ध जोगाउन प्रेम सँगै प्रयास चाहिन्छ । सम्बन्ध त बल्दै गरेको दिप जस्तो न रहेछ जसलाई हरदम जोगाइ राख्न तेल थपिरहनु पर्दछ । हावाहुरीसँगै बचाइराख्नु पर्दछ ।
यस्तै सम्बन्ध एकतर्फी होस् या दुइतर्फी; यसले मानिसलाई अधैर्य र कमजोर बनाइरहेछ । तर धैर्यता प्रेमको निसर्त नियम हो ।
मेरा लागि उनको यादमा बितेको एक दिन एकपल जस्तै लाग्छ । उनका यादका अगाडि जीवनका हर अनुभव निरर्थक लाग्छन् । उनी सँग भेटिएपछी जीवनको चल्ती फेरिएको छ । मनमा उब्जने प्रशनहरु फेरिएका छन् । र म “म” नभएर उनको यादहरुको संग्रहालय भएको छु । जहाँ उनका हर विषय सङ्ग्रहित छन् । केवल उनैका कुराहरु छन् । र उनी नै म हुँ ! र यो सबै थाहा छ मेरो डायरीलाई । बालकको हर चाहाना उसको आमालाई थाहा भए जस्तै !
शब्दहरुको अर्थ कतिसम्म गह्रुङ्गो हुनसक्छ भन्ने कुरा तिमीलाई जति उनलाई थाहा छैन होला है । यदि थाहा भएको भए मेरा लागि प्रेमको रङ नै बेरङ हुने थिएन होला । मेरो डायरीमा कोरिएका हरेक शब्दमा उनीलाई भेट्छु । हर शब्दले उनका लागि हजार अर्थ बोकेका छन् । सागरभन्दा गहिरो प्रेम बोकेका छन् । त्यसैले अरु जीवनमा शब्द खोज्छन् । म शब्दमा जीवन खोज्छु । किनकी मेरा हर शब्दमा उनी छिन् ।
Read More From Sumanः
Get in touch with us for more Articles and Writings. We regularly post on our Facebook, Twitter, and Instagram.
love story,Offline Thinker,story
वेगबहादुरः जसको बुढेसकाल दुःखको महासागर बन्यो | सुमन
Value Of Having A Good Father | Susmita
रमेश 'उदास'को गजल | Offline Thinker - Offline Thinker , February 16, 2021
[…] उनी, म र मेरो डायरी २ | सुमन भट्टराई | Offline T… […]
Happy Valentine’s Day | Written by Akash Suyal
५ वर्ष अगाडिको भ्यालेन्टाइनस् डे | Secret Thinker